Ukufaka okunye iphaneli le-Xfce nge-Tint2 | Kusuka kuLinux
Ukufaka okunye iphaneli le-Xfce nge-Tint2
Esikhathini esedlule, lapho ngisemsebenzini ngithole i- I-PC ene-256 RAM ngisebenzise I-OpenBox kanye nephaneli elincane kakhulu elibiziwe I-Tint2.
Ngiyisebenzisile futhi ku- Xfce ngeqiniso elilula lokuthi lisebenzisa okungaphansi kuka- xfce4-iphaneli futhi empeleni, kubukeka kukuhle kakhulu. Ngikukhombisa izindlela ezimbili engizivivinye ngazo:
Yayibukeka kanjalo okokuqala ngemuva kokuyisetha, kepha angiwuthandanga kakhulu umphumela. Ngakho-ke ngikushiye ngale ndlela:
Manje uzomiselela kanjani xfce4-iphaneli con I-Tint2? Kulula kakhulu.
Sifaka kuqala. Sivula ukuphela bese sibeka:
Ngemuva kwalokho ku-terminal efanayo sibulala iphaneli le-Xfce:
Sikhipha I-Alt + F2 futhi sibhala:
Ngokuzenzakalelayo ngikubona kukubi, ngakho-ke bekufanele ngiguqule amanye amapharamitha. Ukuhlela I-Tint2, silungiselela ifayela:
Uma sifuna ibukeke njengesithombe sokuqala, sisusa konke okuqukethwe okuvela kulelo fayela (ngemuva kokuyigcina phambilini) futhi sinamathisela konke okuphumayo lesi sixhumanisi. Uma siyifuna njengesithombeni sesibili, sisebenzisa lokhu.
Uma sifuna ukugijima I-Tint2 kanye Xfce ngokuzenzakalela, kufanele siye ku- Imenyu »Izilungiselelo» Iseshini bese uqala »Izicelo ze-autostart» Faka bese ugcwalisa izinkambu ezingenalutho ngale ndlela elandelayo:
Ungahamba ukhethe umbala owuthandayo. Yebo, yini I-Tint2 khombisa ukuvela obala okufanele sikwenze kusebenze i- Umqambi WeWindows de Xfce (okuthile okwakungadingeki ngaphambili).
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Ukufaka okunye iphaneli le-Xfce nge-Tint2
Kubukeka kuthakazelisa, uyivula kanjani imenyu? Usebenzisa zonke izinhlelo zeXFCE? Kunzima ukuyilungisa, ngokwesibonelo: shintsha izithonjana, iphepha lodonga, njll Nginesiqiniseko sokuthi awunankinga ngemibuzo eminingi kangaka, hahahahaha.
Yebo, uma uchofoza kudeskithophu uthola imenyu ngezinketho nezinhlelo zokusebenza. Uma ususa izithonjana zedeskithophu ngokuncamelayo, lapho uthola imenyu yezinhlelo zokusebenza kuphela.
Kuthakazelisa kakhulu, siyabonga ngokusazisa.
Wamukelekile .. Jabulela !!!
Ngizamile nje futhi kubukeka kukuhle.
Ukubona amathuba ayo ngisebenzisa i-tintwizard abayincomayo.
Kepha angiboni ukuthi ngiyifaka kanjani imenyu yohlelo lokusebenza kuyo. Yize kuliqiniso ukuthi singasebenzisa inkinobho yegundane elungile kwideskithophu. Kepha angikuboni kungenziwa ngezifiso kakhulu, yize kukuhle kakhulu.
Siyabonga ngomnikelo, bona izinketho eziningi zosizo lweXfce kakhulu kulokhu okuthunyelwe kwe-Gnome 3 era 🙂
Well ukufaka nini I-Tint2 en Ukuhlolwa kwe-Debian, nalokhu kuyengeza ithi2conf, uhlelo lokusebenza lokuluhlela lufane kakhulu ne- i-tintwizard.. Bheka ukuthi 😀
Yebo, uyifaka nini iTint2 ku-Debian Testing
Ngabe bekufanele ukhulume njengamaNdiya?
Hahaha ngihambile, awunahlonipho ... hahaha
Yebo, uma ufaka ...
Ozithobayo. Ngakufaka lokho kudala ukubona nje ukuthi ungabamba kanjani inqama engaphezulu, kepha angikwazanga. Ekugcineni ngisebenzise i-Openbox ngaphandle kwamapaneli. Manje ngisebenzisa i-XFCE okuthi enguqulweni engu-4.8 ibukeke mihle; kepha mhlawumbe ngazama iTint2 ukubona ukuthi izinto zihamba kanjani.
Siyabonga ngethiphu 🙂
Uyemukelwa kusayithi lethu lakwaGiskard, siyabonga ngokusitshela ngolwazi lwakho. 😀
Awuzange uzame i-LXDE? ilula kune-XFCE futhi ibukeka kangcono kakhulu, impela ngokunambitheka kwami.
Kuyathakazelisa. Enye inketho ye-Adeskbar engiyisebenzisa njengamanje. Ngiyabonga, u-Elav.
Kubukeka kuthakazelisa I-Adeskbar.
Ungasitshela ngokusetshenziswa kwezinsizakusebenza nolwazi lwakho ngokusetshenziswa kwazo?
Kuyiqiniso, i-Adeskbar yinhle kakhulu yize ngingazi noma isathuthuka yini.
Ngiyabonga kungisebenzele kahle kakhulu, kepha munye kuphela umbuzo owaziyo ukusetha ifomethi yewashi kusuka emahoreni angama-24 kuye kwayi-12, Ngiyabonga ...
Kuzofanele ngifunde indoda "yedethi", kepha ngicabanga ukuthi okumele ukwenze ukuhlela i-.tintrc yakho nalapho isho lokhu:
imininingwane enhle, ilusizo kakhulu.
futhi ibhulogi yakho iya kuzintandokazi ...
Ngiyabonga kakhulu uSergio futhi wamukelekile 😀
Ngiwushintsha kanjani umbala wawo usuke ku-tint2 xfa
Unginike umqondo wokuthi esikhundleni se-tint2 buyisela iphaneli yomlingani bese ufaka i-appmenu kuyo, ngoba i-xfce ayisebenzi ku-ubuntu 12.04. Ozithobayo. 😀
Njengoba iLinux manje ikukhombisa ukuthi usebenzisa yiphi i-distro
Amahlaya: I-Costume Party (Windows, Mac & Linux)